Hawl -wadeennada Dalxiiska Hindiya: Sida loo gaadho dhoofinta US $ 400 bilyan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Hawl -wadeennada Dalxiiska Hindiya: Sida loo gaadho dhoofinta US $ 400 bilyan
Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Hawl wadeennada dalxiiska Hindiya ee kulanka wasiirrada
Talooyin dhowr ah ayaa waxaa bixiyay Ururka Dalxiisayaasha Hindiya (IATO) kulan uu ku baaqay Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha, Shri Piyush Goyal, si ay talooyin uga helaan dhoofiyayaasha tallaabooyinka loo baahan yahay in laga qaado baaqa RW ee kordhinta dhoofinta. $ 400 bilyan oo doolar sannadkan oo Hindiya u kaxaynaysa dhaqaale dhan $ 5 tirilyan oo doollar mustaqbalka.
Tallaabooyinka sida furitaanka fiisooyinka elektaroonigga ah ee dalxiiska iyo dib u bilaabidda hawlgallada duulimaadyada caalamiga ah ee caadiga ah ayaa ahaa kuwa ugu sarreeya liiska.
Waxa kale oo la codsaday in qorshaha dhoofinta adeegga ee hindisaha uu sii socdo 5ta sano ee soo socota laguna daro qorshaha RoDTEP siyaasadda ganacsiga dibadda.
Qorshahan waxaa loogu talagalay in lagu soo celiyo dhoofinta, waajibaadka, canshuuraha, iyo canshuuraha ay bixiyeen ee Bartamaha, gobolka, iyo heer degmo.
Isagoo matalaya warshadaha dalxiiska, Rajiv Mehra, Madaxweynaha Ururka Hindida Dalxiisayaasha Dalxiiska (IATO), tallaabooyinka la soo jeediyay sida furitaanka fiisooyinka elektaroonigga ah, dib u bilaabidda hawlgallada duulimaadyada caalamiga ah ee caadiga ah, iwm. Waxa kale oo uu Wasiirka ku wargeliyey xaaladda maaliyadeed ee halista ah ee hawl-wadeennada dalxiisku ay soo mareen intii uu socday aafadu iyo sida loo sii daayay SEIS-ka muddada dheer (Adeegga Dhoofinta Qorshaha Hindiya) ee sanad maaliyadeedka 2019-20 wuxuu muhiim u yahay badbaadadooda.
Mr. Mehra wuxuu kaloo codsaday in adeegga dhoofinta adeegga ee Hindida uu sii socdo 5-ta sano ee soo socota waana in lagu daraa qorshaha RoDTEP siyaasadda ganacsiga dibadda oo loo qaabeeyey 2021-26. Mashruucan waxaa loogu talagalay in lagu soo celiyo dhoofiyayaasha, waajibaadka, canshuuraha, iyo canshuuraha ay ka bixiyaan Bartamaha, gobolka, iyo heer degmo, wuxuuna qiyaas ahaan daboolaa saddex-meelood laba, 65% dhoofinta dalka.
Madaxweynaha IATO ayaa sidoo kale u sheegay Wasiirka in warshadaha dalxiiska waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee kasbaday sarifka lacagaha qalaad sidaas darteedna waa in la siiyaa darajada loo arko inay tahay wax dhoofiye oo la mid ah kuwa soo dhoofiya adeegga. Tallaabada noocan oo kale ah waxay kor u qaadi kartaa tartankooda ku aaddan dalalka deriska ah sidaas darteedna waxay kor u qaadi kartaa imaatinka dalxiisayaasha ajnabiga ah, ayuu ku dooday.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa laga codsaday Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha in hirgalinta sharciga Canshuurta Badeecadaha iyo Adeegyada Isku -dhafan (IGST) ay ka dhacdo halkaas oo dalxiisayaasha ka tagaya Hindiya ay xaq u leeyihiin soo -celinta IGST ee laga bixiyo Hindiya alaabada laga soo saarayo Hindiya iyadoo la raacayo qorshaha Lacag Celinta Dalxiisayaasha (TRT).
Waxa uu sheegay Mr. Mehra, “Marka loo eego [heerka] weyn, Hindiya waxay leedahay awood dalxiis oo aad u weyn, laakiin si aan taas u gaarno waxaan u baahannahay taageero dowladeed oo ku aaddan dhiirrigelinta maaliyadeed iyo sidoo kale hagaajinta kaabayaasha jirka. Iyada oo dawladuhu ay diiradda saarayaan hagaajinta soo jiidashada Hindiya, waxaan hubaa inaan arki doonno [kororka] sidii aynaan hore u arkin. ”